ဇူလိုင်လ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇူလိုင်လ 2019
နေအိမ် > ဇူလိုင်လ 2019
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပတိုက်တွင်အစွန်းရောက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိရှားပါးမှုရှိပါတယ်. Adrenaline ရှာဖွေနေသူများနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားချစ်သူများလှုပ်ရှားမှုများကျယ်ပြန့်နှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဥရောပခရီးစဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျရထားအဲဒီမှာဘယ်လိုသွားရမလဲအံ့သြနေပါလျှင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖုံးအုပျပါပြီ, လွန်း! ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင့်ရဲ့ရထားအတွက်လျှော့ပေါ့ - မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြမယ့်နိုင်ငံအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်, အားဖြင့်ပေါ်ရှုခင်းလိပ်စောင့်ကြည့်. သူတို့ကအစဥရောပမှာအများဆုံး Instagrammable သောအရပ်တို့ကိုမရောက်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ! ဒါကြောင့်ခရီးမှကြွလာသည့်အခါ, သင့်ရဲ့…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သူတို့အားပါတီအပေါ်ဦးထုပ်နှင့် stomping ဘွတ်ဖိနပ်မှုအဖွဲ့ရရန်အချိန်! ကျနော်တို့ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးပွဲတော်များအဘို့အမြျှောအဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ပေါ်မှာဆိုရင်. သငျသညျနွေရာသီအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း party ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? 🙋🏻ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…